Bit By Bit - လေ့လာခြင်းအပြုအမူ - 2.3.5 တပိုင်တနိုင်
မေလ 2014 ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအေဂျင်စီတစ်ခုအဆင်မပြေအမည်, ထောက်လှမ်းရေးအဝန်းဘက်စုံအမျိုးသားဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး Initiative မှဒေတာများရေးစင်တာနှင့်အတူကျေးလက်ဒေသ Utah အတွက်ဒေတာစင်တာဖွင့်လှစ်။ သို့သော် Utah မှာ Data Center ကိုအဖြစ်လူသိများခံရဖို့ရောက်လာပြီသောဤဒေတာစင်တာ, အံ့ဖှယျစွမ်းရည်ရှိသည်သတင်းပို့သည်။ တဦးတည်းအစီရင်ခံစာကြောင့်ပုဂ္ဂလိကအီးမေးလ်များ, ဆဲလ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် Google ရှာဖွေမှု၏ပြီးပြည့်စုံသောအကြောင်းအရာများကို "အပါအဝင်ဆက်သွယ်ရေး၏ပုံစံအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားပေးနိုင်ကြောင်းစွပ်စွဲအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာလမ်းကြောင်း-ယာဉ်ရပ်နားလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ, ခရီးသွားလာခရီးစဉ်, စာအုပ်ဆိုင်ဝယ်ယူမှုအမြိုးမြိုး နှင့်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ် '' အိတ်ကပ်အမှိုက်သရိုက်များ " ' (Bamford 2012) ။ နောက်ထပ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါလိမ့်မည်သည့်ကြီးမားသောဒေတာအတွက်ဖမ်းမိသတင်းအချက်အလက်များ, တာ၏အထိခိုက်မခံသဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမြင့်မားလာဖို့ထို့အပြင် Utah မှာ Data Center ကိုသုတေသီများမှတပိုင်တနိုင်သောကြွယ်ဝသောဒေတာအရင်းအမြစ်တစ်ခုအစွန်းရောက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုများသောယေဘုယျအားဖြင့်, အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကြီးမားသောအချက်အလက်များ၏အများအပြားသတင်းရင်းမြစ်အစိုးရများ (ဥပမာ, အခွန်အချက်အလက်များနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာဒေတာ) သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသည် (ဥပမာမေးမြန်းချက်အင်ဂျင်နှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုခ meta-data ကိုရှာဖွေ) ကထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်ကန့်သတ်ထားပါသည်။ သူတို့တပိုင်တနိုင်ကြောင့်ထို့ကြောင့်ဤဒေတာသတင်းရင်းမြစ်တည်ရှိသော်လည်း, သူတို့သည်လူမှုရေးသုတေသန၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးဖြစ်ကြသည်။
ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံခုနှစ်တွင်တက္ကသိုလ်များမှာအခြေစိုက်အများအပြားသုတေသီများဒီတပိုင်တနိုင်၏အရင်းအမြစ်နားလညျမှုလှဲမှား။ ကုမ္ပဏီတွေမှာလူများနှင့်အစိုးရများ, မိုက်မဲပျင်းရိခြင်းသို့မဟုတ်ဂရုမစိုကြောင့်ဤအ data တွေကိုလက်လှမ်းမမှီမရှိကြပေ။ ယင်းအစားလေးနက်ဥပဒေရေးရာ, စီးပွားရေးနှင့်ဒေတာ access ကိုတားဆီးသောအကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအတားအဆီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, websites များအတွက်အချို့သောအသုံးအနှုန်းများ-of-service ကိုသဘောတူညီချက်များသာဒေတာတွေကိုန်ထမ်းကအသုံးပြုခံရဖို့ဒါမှမဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုပါ။ ဒါကြောင့် data ကိုခွဲဝေမှုအချို့ပုံစံများကိုဖောက်သည်ထံမှတရားဝင်တရားစွဲဆိုဖို့ကုမ္ပဏီများမှဖော်ထုတ်နိုင်ဘူး။ ခွဲဝေမှုဒေတာတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကုမ္ပဏီများအားသိသိသာသာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအန္တရာယ်များလည်းရှိပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှာဖွေရေးဒေတာမတော်တဆတက္ကသိုလ်သုတေသနစီမံကိန်းကို၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Google ထံမှထွက်ပေါက်ကြားလျှင်အများပြည်သူတုံ့ပွနျမညျဘယျလိုစိတ်ကူးဖို့ကြိုးစားပါ။ ထိုသို့သောဒေတာဖောက်ဖျက်, အစွန်းရောက်လျှင်တောင်မှကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တည်မှုအန္တရာယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် Google က-ဆုံးနဲ့ကြီးမားတဲ့အလွန်အန္တရာယ်-ဆန္ဒရှိသုတေသီများနှင့်အတူဒေတာဝေမျှအကြောင်းကိုကုမ္ပဏီများမှ-ဖြစ်ကြသည်။
တကယ်တော့, ဒေတာပမာဏမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးမယ့်အနေအထား၌ရှိသောသူလည်းလူတိုင်းနီးပါး Abdur ချောင်ဒရီ၏ဇာတ်လမ်းသိတယ်။ သူ AOL မှာသုတေသန၏ဦးခေါင်းကိုအခါ 2006 ခုနှစ်မှာတော့သူကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသူ 650.000 AOL အသုံးပြုသူများထံမှအမည်ဝှက်ရှာဖွေရေးမေးမြန်းချက်ခဲ့ကြသည်ထင်ဘာသုတေသနအသိုင်းအဝိုင်းမှထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဖြစ်ဝေးကျနော်ပြောပြနိုင်ပါတယ်အဖြစ်, ချောင်ဒရီနှင့် AOL မှာသုတေသီများကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်, သူတို့သည်သူတို့က data တွေကိုအမည်ဝှက်ခဲ့ကွောငျးထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကမှားခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာလျင်မြန်စွာဒေတာသုတေသီထင်သကဲ့သို့အမည်မဖော်မဟုတ်ကြကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့် New York Times ကိုကနေသတင်းထောက်တွေကိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူ Datasets အတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကကိုဖေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ခဲ့သည် (Barbaro and Zeller 2006) ။ ဒီပြဿနာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ပြီးတာနဲ့ချောင်ဒရီ AOL ရဲ့ website ကနေ data တွေကိုဖယ်ရှား, ဒါပေမယ့်သူကသိပ်နောက်ကျခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဒေတာကတခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာထပ်မံတင်ပို့ခဲ့ကြောင်း, သင်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းဖြစ်ကြောင်းအခါဖြစ်ကောင်းတုန်းပဲမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ချောင်ဒရီပစ်ခတ်နှင့် AOL ရဲ့အကြီးအကဲနည်းပညာအရာရှိချုပ်ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့သည် (Hafner 2006) ။ ဒီဥပမာကိုပြသသည့်အတိုင်း, ဒေတာ access ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ကုမ္ပဏီများအတွင်း၌သီးခြားတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အအကျိုးကျေးဇူးများတော်တော်သေးသေးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အဆိုးဆုံး-ကိစ္စတွင်မြင်ကွင်းကြောက်မက်ဘွယ်သောဖြစ်ပါတယ်။
သုတေသီများသို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အထွေထွေအများပြည်သူလက်လှမ်းမမှီနိုင်ကြောင်းဒေတာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိနိုငျသညျ။ တချို့ကအစိုးရများသုတေသီများ access ကိုလျှောက်ထားရန်လိုကျနာနိုငျသညျ, နောက်ပိုင်းတွင်ဤအခနျးပြပွဲအတွက်ဥပမာအဖြစ်, သုတေသီများရံဖန်ရံခါကော်ပိုရိတ်ဒေတာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိနိုငျသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Einav et al. (2015) အွန်လိုင်းလေလံလေ့လာဖို့ကို eBay မှာသုတေသီနှင့်အတူပူးပေါင်း။ ငါအကြာတွင်အခန်း၌ဤပူးပေါင်းထံမှလာသည်ဟုသုတေသနအကြောင်းကိုပိုမိုစကားပြောပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါအောင်မြင်သောမိတ်ဖက်အတွက်ကြည့်ရှုသောပါဝင်ပစ္စည်းများအပေါငျးတို့သလေးကြောင့်ယခုတွင်ငါသည်ကြောင့်ဖော်ပြထားခြင်း: သုတေသီအကျိုးစီးပွား, သုတေသီစွမ်းရည်, ကုမ္ပဏီအကျိုးစီးပွားများနှင့်ကုမ္ပဏီစွမ်းရည် ။ ငါဖြစ်စေအဆိုပါသုတေသီဒါမှမဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်-ဖြစ်ကကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ဤပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အစိုးရ-ရှိကြတဦးတည်းရှိသောကြောင့်အများအပြားအလားအလာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကျရှုံးမြင်ကြပါတယ်။
သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်အတူလက်တွဲဖွံ့ဖြိုးသို့မဟုတ်ကန့်သတ်အစိုးရ data ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိနိုင်ကြသည်ရင်တောင်, သို့သော်, သင်တို့အဘို့အခြို့သော, အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာသင်ဖြစ်ကောင်းသည်အခြားသုတေသီများသင့်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုအတည်ပြုရန်နှင့်တိုးချဲ့နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ဆိုလိုတာကအခြားသုတေသီများနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဒေတာကိုမျှဝေနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ဒုတိယအချက်အသငျသညျတောငျးဆိုနိုငျသောမေးခွန်းများကိုကန့်သတ်ထားစေခြင်းငှါ, ကုမ္ပဏီများကသူတို့ကိုမကောင်းတဲ့ကိုကြည့်စေနိုင်ကြောင်းသုတေသနပြုခွင့်ပြုဖွယ်မရှိပေ။ နောက်ဆုံးတော့အဲဒီမိတ်ဖက်လူတွေကိုသင့်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်ထင်စေခြင်းငှါ, ဘယ်မှာအကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခအနည်းဆုံးသဏ္ဌာန်, ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဤအအားနည်းချက်တွေအားလုံးဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လူတိုင်းလက်လှမ်းမပေးကြောင်းဒေတာနဲ့အလုပ်လုပ်ထောက်နှင့်, အားနည်းချက်တွေနှစ်ဦးစလုံးရှိကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ်မှာတော့ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုအများကြီးသုတေသီများမှလက်လှမ်းမမှီနိုင်။ အဲဒီမှာလေးနက်ဥပဒေရေးရာ, စီးပွားရေးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, data ကို access ကိုတားဆီးသောအကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအတားအဆီးများနှင့်နည်းပညာတိုးတက်ကောင်းမွန်အဖြစ်သူတို့နည်းပညာဆိုင်ရာအတားအဆီးတွေမဟုတ်ကြောင့်ဤအတားအဆီးများကွယ်ပျောက်မသွားပါလိမ့်မယ်။ အချို့ကအမျိုးသားရေးအစိုးရများအချို့သောအချက်အလက်စာရင်းများအတွက်အတွက်ဒေတာ access ကိုဖွင့်အဘို့အလုပျထုံးလုပျနညျးထူထောင်ကြပေမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်မှာအထူးသဖြင့် ad hoc ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အချို့ကိစ္စများတွင်သုတေသီများ data တွေကို access ကိုရရှိရန်ကုမ္ပဏီများနှင့်မိတ်ဖက်နိုင်ပေမယ့်ဒီသုတေသီများနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်သည်။